165 tapitrisa ny mpanjifa manana Spotify | Avy amin'ny mac aho
165 tapitrisa ny mpanjifa manana Spotify
Raha nandany roa taona mahery i Appleamin'ny fanavaozana ny isan'ny mpanjifa ny serivisy fandefasana mozika, Apple Music, ny orinasa soedoà Spotify dia manohy mampitombo ny isan'ny mpampiasa, na amin'ny kinova maimaim-poana izany na amin'ny kinova aloa. Raha ny tarehimarika farany navoakan'ny orinasa dia 165 tapitrisa ny isan'ireo mpamandrika mandoa.
Raha amin'ireo mpamandrika 165 tapitrisa mandoa vola ireo dia ampiantsika ireo mpampiasa 200 tapitrisa amin'ilay kinova maimaimpoana, hitantsika ny fomba ananan'ilay sehatra soedoà 365 tapitrisa isam-bolana mpampiasa mavitrika, izay maneho fiakarana 22% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa.
Nahazo Spotify tao anatin'ny telo volana lasa, Mpanjifa vaovao mandoa 7 tapitrisa, avy amin'ny 158 tapitrisa nananan'izy ireo tamin'ny 31 martsa ka hatramin'ny 165 tapitrisa hatramin'ny 31 Jona 2021. Ny fiakaran'ny mpamandron-karama dia nitombo 20% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Raha ny filazan'ny orinasa dia manana mihoatra ny Podcast 3 tapitrisa eo amin'ny lampihany, sehatra iray izay lasa miha-manandanja kokoa ary hamela ny orinasa hanana, loharano fidiram-bola miaraka amin'ny taha ambony tombony.
Anisan'ireo mpampiasa nampiasa podcast tamin'ny telovolana faharoa, matanjaka ny fanjifàna (tafakatra 95% isan-taona isan-taona amin'ny ankapobeny ary mihoatra ny 30% isan-taona isan-taona ny mpampiasa), raha ambony kosa ny tahan'ny fihazonana isan-kerinandro sy isam-bolana. Nandritra ny telovolana, ny anjaran'ny podcasts nandritra ny ora fanjifana nandritra ny ora maro teo amin'ny lampinay dia nahatratra ny avo indrindra ihany koa.
Spotify dia nasiana marika tanjona hahatratra 400 tapitrisa mpampiasa mavitrika isam-bolana amin'ny faran'ity taona ity. Amin'ireo mpampiasa mavitrika 400 tapitrisa ireo dia manantena izy fa eo anelanelan'ny 177 sy 181 no ho mpandoa vola. Raha heverintsika fa isaky ny telovolana dia mahazo mpanjifa vaovao 7 ka hatramin'ny 9 tapitrisa dia tena zava-misy ny vinan'ny fitomboan'ny Spotify.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » 165 tapitrisa ny mpanjifa manana Spotify
Nisy fangatahana asa nataon'i Steve Jobs natao lavanty efa ho telo hetsy ariary
Ny sarontava dia takiana amin'ny Apple Store any Etazonia indray